Yugyan Daily » ‘नेकपा एमाले’ नाममा नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता
मदन भण्डारीको अनुयायी भएको कारणले नेकपा एमालेको नाममा दल बनाउ
‘नेकपा एमाले’ नाममा नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता
‘नेकपामा विवाद उत्पन्न हुनु र हामीले पार्टी दर्ता गराउनु सँगसँगै जस्तो भयो । स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु एकैचोटि भएको जस्तो मात्रै हो,’: महासचिव मनिषकुमार उपाध्याय
असार १७ गते २०७७/अनलाइनखबर
बालुवाटारमा जोडतोडले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिँदै गर्दा सञ्चारमाध्यममा ‘ब्रेकिङ न्युज’ आयो– ‘नेकपा एमाले’ नाममा नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता ।
यदि वर्तमान सरकार ढलेमा ओलीले पार्टी फुटाउन सक्ने आकलनकै बीचमा ‘नेकपा एमाले’ दर्ताका लागि निवेदन गएपछि त्यसले तरङ्ग ल्याउने नै भयो ।
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा केही नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले नै पार्टी फुटाउनका लागि यो चालबाजी रचेको आरोप लगाए । उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले दल दर्तामा प्रधानमन्त्री संलग्न भएको आफूसँग प्रमाण नै रहेको दाबी गरे । अर्कोतर्फ ओली गुटका नेता–कार्यकर्ता चाहिँ ओलीलाई आरोपित गर्न प्रचण्ड समूहले नै यो जाल बुनेको हल्ला गरिरहेका छन् ।
नेकपा एमाले नाममा दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा मनिषकुमार उपाध्यायको नामबाट गत १२ असारमा निवेदन दिइएको थियो । निर्वाचन आयोगले निवेदन दर्ता गरे पनि दल दर्ताको प्रक्रिया बाँकी छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको पत्र अनलाइनखबरलाई प्राप्त भएको छ, जसअनुसार अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा महिला छन् । अध्यक्षमा प्रस्तावित सन्ध्या तिवारी विराटनगरकी हुन् भने उपाध्यक्षमा प्रस्तावित भगवती खड्का रामेछापकी । यसैगरी महासचिव मनिष जनकपुरका हुन् । केन्द्रीय समितिमा ५ जना काठमाडौंका छन् ।
प्रस्तावित २१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १० जना महिला छन् । उनीहरूमध्ये एक केन्द्रीय सदस्य ७५ वर्षका छन् बाँकी सबै ५० वर्षमुनिका छन् । अधिकांश ३० देखि ४० वर्षसम्मका युवा छन् । अध्यक्ष तिवारी भने ४७ वर्षकी हुन् ।
तिवारीको पृष्ठभूमि खुलेको छैन । उनी सार्वजनिक हुन पनि चाहेकी छैनन् । उपाध्यक्ष भगवती खड्काको नाम भने परिचित नै हो, खासगरी खेलकुद क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि । खड्का चर्चित महिला रेसलर हुन् । उनले केही टेलिश्रृङ‍्खलामा अभिनयसमेत गरेकी छन् । राजनीतिमा चाहिँ उनी सक्रिय थिइनन् ।प्रस्तावित एमालेको नेतृत्व पङ‍्क्ति पहिचान गर्ने क्रममा हामीले महासचिवका रुपमा प्रस्तावित महासचिव मनिषकुमार उपाध्यायलाई भेट्टायौं । फोन संवादमा उनी राम्रोसँग खुल्न नचाहे पनि केही कुरा सेयर गरे ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कुनै पनि नेताहरूसँग आफूहरूको सम्बन्ध नभएको र कसैबाट परिचालित पनि नभएको मनिषले दाबी गरे । आफूहरू सबैजना मदन भण्डारीको अनुयायी भएको कारणले नेकपा एमालेको नाममा दल बनाउन चाहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामी सबै फरक-फरक पेसा व्यवसायमा आबद्ध युवा हौं । कोही कपडा व्यवसायी, कोही मसला व्यवसायी, कोही खेलाडी, कोही समाजसेवी छौं । केही महिनादेखि विभिन्न ढंगले संगठित भएर राजनीतिमा आउने गृहकार्य गरिरहेका थियौं । ३–४ महिनाको तयारीपछि मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर पार्टी दर्ताको लागि निवेदन दिएका हौं,’ उनले सुनाए ।
उनले आफूहरूलाई ‘पूर्वएमाले’ पनि भन्न नमिल्ने बताए । ‘मदन भण्डारीको विचारबाट प्रभावित मात्र हौं । म पहिले एमालेको सामान्य शुभचिन्तक थिएँ, तर पार्टीको सदस्यता लिएको होइन । अहिले नेकपामा पनि हामी छैनौं,’ उपाध्यायले भने ।
आफूहरू देशका लागि केही गरौं भन्ने भावनाबाट राजनीतिमा आउन चाहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी सबैको एउटै हुटहुटी यही थियो कि देश सही दिशामा जान सकेन । अब हामीले नै केही गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिमा आउनुको विकल्प देखेनौं । राजनीतिमा आउनका लागि मदन भण्डारीको विचारलाई हामीले पथप्रदर्शकका रुपमा अपनाउने निर्णय गर्‍यौं । एमाले नाम चाहिँ ब्राण्डिङ गर्न सजिलो हुन्छ भनेर छनोट गरेका हौं । हाम्रो अरू कुनै अन्तरनिहित स्वार्थ छैन ।’
अहिले नेकपामा उत्पन्न भएको विवादसँग आफूहरूको कुनै सरोकार र साइनो नरहेको उनले दाबी गरे ।
‘नेकपामा विवाद उत्पन्न हुनु र हामीले पार्टी दर्ता गराउनु सँगसँगै जस्तो भयो । स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु एकैचोटि भएको जस्तो मात्रै हो,’ उनले भने ।
उपाध्यायसँगको थप संवाद:-
‘प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमै बोलाएर तपाईंहरूलाई भेटेको हल्ला पनि सुनिन्छ नि ?
त्यो वाहियात हल्ला हो । हामी अहिलेसम्म बालुवाटारमा टेकेका पनि छैनौं ।
भोलि नेकपा फुट्ने अवस्था आयो र ओलीले नेकपा एमाले ब्युँताउन चाहनुभयो भने तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?
त्यो उहाँहरुको कुरा हो । हामीले के गर्न सक्छौं र ?
मेरो मतलब उहाँले नेकपा एमाले नाम तपाईंहरूसँग माग्नुभयो भने दिन तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?
हामीले दर्ता गरेको नाम अरूलाई किन दिने ? दिने प्रश्नै उठ्दैन । बरु उहाँहरू यदि हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्न चाहनुभयो भने स्वागत गर्न सकिन्छ ।
ओलीले नै तपाईंहरूको पार्टीमा प्रवेश गर्ने आशा पनि गर्नुभएको छ?
त्यस्तो हुन सक्छ । ओली मात्र किन माधव नेपाल, वामदेव गौतमलगायत सबै नेताहरूलाई हाम्रो विचार मन परेर आउनुभयो भने स्वागत नै गर्नेछौं ।
तपाईंहरूको संगठन चाहिँ कत्रो छ अहिले ?
२१ जनाको केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गरेका छौं‌ । सदस्य चाहिँ ५ सय ७२ जना हुनुहुन्छ । यसलाई बढाउँदै लैजाने छौं ।
अर्को चुनाव लड्नुहुन्छ होला, के लक्ष्य लिनुभएको छ ?
पार्टी खोलेपछि चुनाव त लड्ने नै हो । परिणामको विषयमा अहिले नै सोचेका छैनौं । हामी असल राजनीतिक संस्कार विकास गर्न चाहन्छौं ।
तपाईंहरू संगठित हुनुभएको चाहिँ कसरी हो?
सकारात्मक सोच लिएपछि आपसमा जोडिन समय लाग्दैन । हामी यही माध्यमबाट संगठित भएको भन्ने छैनौं । साथीभाइबीच सल्लाह गर्दै अगाडि बढेका हौं ।
निर्वाचन आयोगले तपाईंहरुको पार्टी दर्ता गर्ला त ?
किन नगर्नु रु प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । केही दिनमा नै हामीले प्रमाणपत्र पाउनेछौं । त्यसपछि मिडियामा आउछौं ।
तपाईंको अध्यक्षसँग सम्पर्क गराउन सक्नुहुन्छ ?
अध्यक्षजी अहिले काहीँ पनि बोल्न चाहिरहनुभएको छैन । नम्बर पनि कसैलाई नदिने भन्ने छ । यसमा केही कारण छन् । हामी प्रमाणपत्र पाएपछि मात्रै तपाईंहरूमाझ आउने छौं ।
अध्यक्षको पृष्ठभूमि चाहिँ के हो ?
उहाँ समाजसेवामा आबद्ध हुनुहुन्छ । अरू बताउन मिल्दैन ।
फेसबुकमा फेला पार्न सकिएला नि?
अहँ फेसबुक सेसबुक केही छैन । अहिले हामी सबै गोप्य नै छौं ।